Sidee heshiiskii dekadda Berbera ee Somaliland oo aan la aqoonsaneyn uu isbedel ku Keenay Siyaasada Geeska
Tuesday May 01, 2018 - 17:07:42 in Maqaallo by Abdikarim Saed Salah
Hargeysa (Horseednews.com) Inkastoo si rasmi ah loo mamnuucay in laga shaqeeyo Soomaaliya bishan March, DP World ayaa billaabi doona mashruuc ka dambeeya sanadkaan oo laga yaabo in ay saameyn ku yeelato gobolka, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba.
Sannadka 2016-ka, shirkadaha dekadda leh ee Imaaraadka Carabta ayaa xiray heshiis qandaraaska ah oo lagu qiimeeyay $ 442 milyan si loo horumariyo loona maamulo dekedda Berbera ee istaraatijiyadeed. Shirkaddu waxay heshiiskan la gashay Somaliland, oo ah gobol goboleed oo aan la aqoonsan oo ku yaal waqooyiga Soomaaliya.
Dawladda federaalka ah ee Muqdisho waxay dib u soo celisay heshiiska, iyada oo u aragtay inay jabiso awooddeeda. Bishii Maarso, baarlamaankii qaranku wuxuu u codeeyay inuu si xushmad ah u mamnuuco DP World. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan awood u lahayn in ay hirgeliso xukunka, mashruuca ayaa wali lagu wadaa inuu sii socdo.
Markay taasi dhacdo, horumarinta dekeddan yar ee Gacanka Cadmeed ayaa si weyn u xoojin karta socodsiin la'aanta Somaliland ama Soomaaliya, laakiin Itoobiya, Jabuuti iyo Geeska Afrika ayaa si ballaadhan u ballaaran.
Maxaa heshiisku u yahay Somaliland
Muhiimada dekedda Berbera ee Somaliland waa mid cad. Marka la eego jamhuuriyada caalamiga ah ee aqoonsiga caalamiga ah, waxaa laga jari doonaa gargaarka caalamiga ah waxayna si xoog leh ugu tiirsan tahay xawaaladaha. Gobolku waxa uu sameeyay nidaam siyaasadeed oo dimoqraadi ah oo xasilloon, laakiin wuxuu ku jiraa dhibaatooyin dhaqaale oo badan sida shaqa la'aanta.
Sidaa darteed, iyada oo arrimahaani aad u yar yahay, xukuumadda Somaliland waxay rajaynaysaa in qorshaha casriyeynta dekedda Berbera iyo abuuritaanka aag dhaqaale oo lacag la'aan ah uu keeno shaqooyin badan oo loo baahdo. Dekadda ayaa durbadiiba ah il dhaqaale oo dakhli iyo shaqo ah, laakiin awoodda ayaa si weyn loogu kordhin doonaa 400 mile oo cusub iyo 250,000 m2 yard ah. Tani waxay dekedda u noqon kartaa xarun ganacsi oo badbaada bada ee gobolka oo si weyn kor loogu qaado dakhliga dowladda iyada oo loo marayo waajibaadka canshuurta iyo 30% saamiga mashruuca. Waxay noqon kartaa isbedel dhaqaale.
Hase yeeshee, siyaasadda siyaasadeed ee laga yaabo, waxa laga yaabaa, inay tahay arrin muhiim ah. Heshiiskaasi wuxuu sii soconayaa inkastoo dadaalada dadaalka badan ee ka socda Soomaaliya, taas oo ka dhigtay mid aan sharciga waafaqsaneyn oo lagu soo rogay cabashooyinka rasmiga ah ee lala yeeshay Jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa mar kale ku booriyay DP World inay "dib u fiiriyaan" toddobaadkii hore. Xaqiiqda ah in ay isku dayayaan in ay khalkhal galiyaan mashruucan wax saameyn ah oo aan wax ku ool ah ka muujinaynin la'aanta Soomaaliya awooddeeda ku aaddan dhulkeeda waqooyiga ee burburay.
Madaxwaynaha Somaliland Muse Biixi Cabdi ayaa isku dayey inuu ka faa'iidaysto tabar-darradan iyada oo sii xoojinaysa xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka. Waxa uu dhawaan booqday Abu Dhabi halkaas oo lagu dhawaaqay in waddanka Khaliijka uu ku tababaran doono ciidamada Somaliland iyada oo qayb ka ah heshiis gaar ah oo lagu dhisayo saldhig milatari oo ku taal Berbera. Bishii Abriil, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Imaaraadka Carabta ayaa xitaa ku dartay qayb ka mid ah foomka fiisaha si loogu oggolaado muwaadiniinta in ay ka codsadaan "Jamhuuriyadda Somaliland" halkii ay ka ahaan lahaayeen Soomaaliya.
Qof kasta oo ku nool gobolka wuu ku faraxsan yahay. Waxaa jira eedeymo sheegaya in saraakiisha xukuntay ay aqbaleen laaluush si ay u oggolaadaan mashruuca. Mucaaradka ayaa ka cawdey in la'aanta hufnaanta heshiiska. Dhanka kale, qaar kale ayaa ka digaya in iska-horimaadka dhul-beereedka Berbera uu keeni karo muran iyo cabashooyin.
Si kastaba ha noqotee qaabka loo siman yahay, heshiiskii dekedda Berbera wuxuu si adag u xoojiyay Somaliland hal talaabo u dhawaanshaha aqoonsi caalami ah, oo ah ujeedo aan weli gaarin 27-kii sano ee la soo dhaafay.
Heshiiskaas waxa loo adeegsanayaa Itoobiya
Sidoo kale isbeddelka xiriirka ka dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya, heshiiska DP ee adduunka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu saameyn muhiim ah u leeyahay Itoobiya. 1da Maarso, waxaa lagu dhawaaqay in hegemon gobolku uu helay 19% saamiga mashruuca. Iyadoo qayb ka ah heshiiskan, Itoobiya waxaa looga baahan yahay inay dhisaan "Berbera Corridor", oo ah $ 300 milyan oo doolar oo isku xirta dekadda caasimadda Addis Ababa.
Heshiiska Itoobiya ee ku-meel-gaadhka ah ee heshiiska lagu darayo wuxuu ku darayaa waddan kale oo ay Somaliland si toos ah ula shaqeynayso. Iyada oo ay ka badan yihiin dad ka badan 100 milyan, waxay sidoo kale dammaanad ka dhigeysaa dekedda Berbera suuq weyn oo muhiim ah oo ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya waxay u taagan tahay inay ka faa'iideysato ballaarinta dekedda, dhaqaale ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba, waxayna dhab ahaantii ku fashilmeen in ay UAE iyo dalal kale oo Gacanka ah si ay maalgashi ugu sameeyaan Berbera muddo sanado ah.
Sababtaas awgeed waa tan, hadda, 95% waddanka dhoofinta iyo dhoofinta dalka ee waddanka oo dhoofaya ayaa soo maraya Jabuuti. Dekedda casriga ah ee Somaliland ayaa bixinaysa meel kale oo loogu talagalay Addis Ababa waxaana laga yaabaa in ay ku tiirsanaato culeyska culus ee dhinaca deriska ee woqooyi bari. Waddada Berbera waxay sidoo kale ka caawin kartaa Itoobiya in ay furto gobollada aan horay loo barbar dhigi lahayn, gaar ahaan ganacsiga xoolaha iyo alaabada beeraha. Maqaalkani wuxuu ka doodaa, mashruucani wuxuu kaloo leeyahay qiimaha juquraafiga ah ee Addis Ababa ee ku haysanaya Eritrea oo go'doominaysa isla markaana xoojinaysa xakamayntiisa.
Heshiiskaas macnaheedu waa Jabuuti
Sidoo kale, Muqdishu, xisbigana ugu guul daraysta heshiiska DP World-ka waa Jabuuti, taas oo ku tiirsanayd caadooyinka Ethiopia sida Itoobiya oo ku tiirsan marin-u-helka Jabuuti. Jabhadda ONLF ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay in ay ka baxdo Xuduudaha Itoobiya,
Jabuuti si cad ayaa looga niyad-jabsan yahay in adduunweynaha DP-da ee sii kordhaya uu raadinayo in uu horumariyo dekadaha labada Jabuuti iyo Somaliland. Waxay dhab ahaantii horeba ula jahawareeysay shirkadda, oo la siiyay 50-sano oo heshiis ah in ay maamusho Damiinka Konteyner ee Doraleh 2006. Sanadkii 2014, dawladdu waxay soo gudbisay sheegashada in shirkadda ay leedahay dawladdu leedahay ee UAE ay samaysay lacago sharci-darro ah si loo sugo qandaraaska. Bishii Febraayo, maxkamad London ah ayaa dafirtay eedeymaha, taas oo sababtay in Jabuuti ay joojiso heshiiskan si aan kala go 'lahayn oo ay UAE ku magacawday "dhaqan aan rasmi ahayn" iyo "sharci daro".
Waxaa loo qorsheeyay in la bilaabo dhismaha sanadkaan, heshiiska Berbera wuxuu si cad u leeyahay labada guuleystey iyo guuleystayaasha. Goobta aan la saadaalin Karin iyo kuwa ka soo horjeeda, horumarkani wuxuu arki karaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo dhaqaale oo ballaaran oo bilaabmaya wakhti.